Podcast 9x18: Tapitra ny fiandrasana, tonga ny HomePod | Avy amin'ny mac aho
Herinandro iray hafa indray izahay te-hizara aminao ny #podcastapple isan-kerinandro ary amin'ity indray mitoraka ity ny vaovao lehibe satria tsy nisy izany, dia mifandraika amin'ny ny fanombohana ny HomePod. Eny, Apple dia nanao ny daty famandrihana ho an'ny tompon'andraikitra mpandahateny vaovao ao amin'ny orinasa ary niresaka momba izany izahay amin'ireo mpiara-miasa amin'i Actualidad iPhone sy i Actualidad Gadget.
Amin'ity lafiny ity, tsy ny podcast rehetra no monoteman'ny vokatra vaovaon'i Apple, fa mandray ny ankamaroan'ny andraikitra izy io. Fotoana iray hafa mahaliana io no tena fanontaniana sy valiny izay nataonay tao amin'ny podcast, izay amalianay ny sasany amin'ny fanontanianao izay tonga taminay avy tamin'ny Fantsona Telegram Podcast Apple Manoro hevitra anao izahay hisoratra anarana handray anjara mavitrika amin'ireo mpampiasa 400 mahery ary hametraka ny fanontanianao hahafahantsika mamaly ao amin'ny podcast.
Na ahoana na ahoana, ny zavatra tsara dia mamorona vondron'olona tsara tarehy isika sy izany anjara biriky ny fasika dia tena tsara ho an'ny rehetra. Ankoatry ny fialamboly miresaka momba izay tiantsika, dia afaka mahita valiny izahay na manome ny anay ho an'ireo mpampiasa hafa mila ny fanampiantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Podcast 9 × 18: Tapitra ny fiandrasana, eto ny HomePod
Ny zava-misy amin'ny Dolby Vision amin'ny Apple TV 4K miaraka amin'ny fahitalavitra sasany
Ho fanampin'ny macOS 10.13.4 beta dia misy ihany koa ho an'ny mpamorona tvOS 11.3